CNC ခုံစက် နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ CNC ခုံစက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
MAKES THINGS POSSIBLE High Quality CNC Machine & Automation Machine Supplier (SINCE 2013)
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် CNC ခုံစက်, အလိုအလျောက်စက်, CNC လှည့်စက် အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး CNC ခုံစက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် CNC ခုံစက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
CNC စက်စက်ကိုယ်ထည်သေးငယ်သည့်နေရာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစီစဉ်ခြင်းသည်ပိုမိုပျော့ပြောင်းသည်. ၄၅-ဒီဂရီ inclined bed design သည်ကောင်းမွန်သော chip ဖယ်ရှားရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပေးသည်,ပေါင်းစည်းပုံသွင်းခြင်းသည်ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုကိုတိုးတက်စေပြီးလေးလံသောဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်သင့်တော်သည်. မြင့်တယ်-တင်းကျပ်သော linear လမ်းညွှန်များသည်လျင်မြန်။ တိကျသောဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းကိုရရှိစေပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်. ထူးခြားချက်: အမြင့်ကိုသုံးသည်-rigidity linear ရထားလမ်း,မြန်ဆန်တိကျသောဖြတ်တောက်နိုင်မှုသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးစေသည်. ၄၅̊အိပ်ယာဒီဇိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သော chip ဖယ်ရှားရေးလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်. စက်၏ဒီဇိုင်းသည် ergonomics နှင့်ကိုက်ညီသည်,မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်တိကျမှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အော်ပရေတာ၏ရွေ့လျားမှုကိုတိုးတက်စေသည်. သတ်မှတ်ချက်: ကုတင်ပေါ်လွှဲလိုက်သည်:360 မီလီမီတာ လက်ဝါးကပ်တိုင်လျှောကျော်လွှဲ:၂၂၅ မီလီမီတာ မက်စ်.လှည့်ခြင်း Dia.:၂၂၅ မီလီမီတာ မက်စ်.အရှည်လှည့်:320 မီလီမီတာ Chuck အရွယ်အစား:၆ လက်မ X/Z Axis ခရီးသွား:၁၄၂/၃၂၅ မီလီမီတာ မက်စ်.Spindle မြန်နှုန်း:၆၀၀၀ rpm Spindle နှာခေါင်း:A2-5/A2-6(ဖယ်ပါ.) Tool ကိုရာထူးအရေအတွက်:8T လမ်းညွှန်ချက်များ:တစ်ပြေးညီ Coolant Tank ၏ Capacity:110L ကြမ်းပြင်အာကာသ(LxW):1800x1450 မီလီမီတာ စက်အလေးချိန်(N.W.):3300 ကီလိုဂရမ် Standard Accessories များ:3မေးရိုးဟိုက်ဒရောလစ် Chuck: Hard claw ၁ စုံ အို.ဒါလည်း.ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ ဟိုက်ဒရောလစ်အမြီး နူးညံ့သောလက်သည်း ၁၀ စုံ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် စင်တာမှာနေတာလား အအေးပေးစနစ် Chuck ညှပ်များအတွက် Foot switch သည် အလိုအလျောက်ချောဆီစနစ် MPG လက်ဘီး အလုပ်လုပ်ရန်အလင်းပေးရတယ် Tool box အပူထုတ်စက် Morse ကကျဉ်းလက် ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ&အင်္ကျီလက်များသည်သက်ရှိပစ္စည်းအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်3လခန့်အာမခံချက်:ယန္တရားအတွက် ၁ နှစ်အာမခံ,ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမခံချန်လှပ်ထားသည်.ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
Aluminium Ingots ကိုပုံသွင်းသည်
လူမီနီယမ် ingot HD4အလူမီနီယံအလွိုင်းသတ္တုစပ်၏ဆွဲငင်အားသည် ၂ ခုသာရှိသည်.6~2.7,၎င်းသည်အလေးချိန်ပေါ့ပါးရုံသာမက corrosion resistance အတွက်အထူးကောင်းမွန်သည်,မော်တော်ကားနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များတွင်သာမကတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်,စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ,pneumatic tools များ,တိကျစက်ပစ္စည်းများ,ကွန်ပျူတာဆက်သွယ်ရေးကိရိယာနှင့်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ. . .ဒုတိယမြောက်အလူမီနီယံသတ္တုစပ်သတ္တုများကိုစွန့်ပစ်ထားသောအလူမီနီယံထုတ်ကုန်များ အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်သည်,နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ (သို့) အထူးလိုအပ်ချက်များအရမူလအလူမီနီယံကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထည့်ခြင်း,ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောသတ္တုစပ်ထည့်သွင်း.အမျိုးမျိုးသောသတ္တုစပ်ပေါင်းစပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မှာသန့်စင်သောအလူမီနီယမ်၏သန့်စင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်.ပုံသွင်းဓာတုဗေဒနှင့်ရူပဗေဒမလုံလောက်ပါ,ကမ္ဘာပေါ်တွင်သယံဇာတများရှားပါးလာသည်,အလူမီနီယမ်သည်ပြန်ထုတ်ရန်လွယ်ကူသည်.ထို့ကြောင့်,ဒုတိယမြောက်အလူမီနီယံအလွိုင်းသတ္တုပြားများအသုံးပြုခြင်းသည်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေရုံသာမကအရင်းအမြစ်များကိုပြန်လည်အသုံးချနိုင်သောကွင်းဆက်ကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်,၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည့်စီးပွားရေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: အသွင်အပြင်:ငွေရောင်အဖြူရောင် အလေးချိန်:၆-တစ်လုံးလျှင် ၇ ကီလိုဂရမ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း:98-99.7% လစဉ်ထောက်ပံ့ရေးပမာဏ:၁၀၀၀ MT MOQ:၂၀ တန် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု(စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်): %,အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. Si Fe မောင် Mn 0.954-0.963 0.624-0.638 4.89-4.98 0.579-0.584 ပြေတီ ဦး Cu Zn အယ်လ်၊ 0.186 max. 0.0749 0.192 max. 92.4-92.6 ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၁၅ ဝန်းကျင်-၁၀၀ ရရှိပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်%ငွေပေးချေမှုကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:ထွ-အလုပ်,FOB,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်လမ်းဆိပ်ကမ်း:ကော့သောင်းငွေပေးချေမှု:၁၀၀%တီ/T order မှာယူမှုလက်ခံရရှိသည်.အထုပ်:သစ်သား pallet (သို့) သင်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ်
ဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက်ထူးခြားချက်: ဖိုက်ဘာလေဆာသည်လှိုင်းလှိုင်းတွင်ပိုမိုတုန်ခါမှုရှိသည်,နိမ့်ကျခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုကောင်းခြင်း.၎င်းသည်ပြင်ပဖုန်မှုန့်နှင့်စက်ပစ္စည်းလျော့ရဲမှုဒဏ်ကိုမခံရပါ,နှင့် output laser beam သည်တည်ငြိမ်သည်. ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသည်,မြင့်မားသော photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည်,ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသည်,အသုံးပြုမှုစရိတ်သက်သာသည်. စက်တစ်ခုလုံးသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်,ရွှေ့ရလွယ်ကူသည်,အပြင်အဆင်များနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုတ်ကုန်ဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားအတွက်သင့်တော်သည်. သတ်မှတ်ချက်: အမှတ်အသားအကွာအဝေး:၁၅၀ မီလီမီတာ x ၁၅၀ မီလီမီတာ မက်စ်.ဝါယာကြိုးအမြန်နှုန်း:၈၀၀၀ မီလီမီတာ/၎ Min Line Width:0.01~0.၂ မီလီမီတာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ：AC220v ဖြစ်သည်/60Hz ဖြစ်သည် အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်:အပူချိန် 0~၃၅̊ဂ,ရေနံချောင်း:10~90% အအေးပေးစနစ်:လေအမျိုးအစား စက်အရွယ်အစား:၉၄ x ၇၉ x ၁၅၅ စင်တီမီတာ ဖိုင်အမျိုးအစားများအတွက်ပံ့ပိုးမှု:BMP,အာအိုင်,CDR,PLT,DX,JPG,PGN လျှောက်လွှာများ:သတ္တုသို့မဟုတ် Non ပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်-သတ္တုပစ္စည်းများ.ထွ:ယူအက်စ်ဘီ,SD ကဒ်,အိုင်စီ,Wafer များ,ခလုတ်အမျိုးအစားများ,သံမဏိ,လူမီနီယမ်,ကြေးနီ,သွပ်သတ္တုစပ်,ဆဲလ်ဖုန်းကိစ္စ,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ,နှင့်အခြားပစ္စည်းများစသည်တို့. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၁၅ ဝန်းကျင်-ငွေပေးချေမှုခံယူပြီးရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
အလူမီနီယံ Die Casting မှို
အလူမီနီယံ Die Casting မှိုCasting မှိုသည်စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးများသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်.Die Casting မှိုသည်အထီးမှိုနှင့်အမျိုးသမီးမှိုဖြစ်သည်,သွန်းသောအရာကိုအထီးမှိုနှင့်အမျိုးသမီးမှိုကြားအခေါင်းပေါက်ထဲသို့ထိုးသွင်းသည်.အရည်သည်အအေးခံပြီးခိုင်မာလာသည်,ပုံသဏ္asာန်နှင့်အတိအကျတူညီသောပုံစံနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု. Die casting molds များတွင်အဓိကအားဖြင့် die ပါဝင်သည်-ပူအခန်းသေဘို့အမှိုများပုံသွန်း-ပုံသွင်းစက်များ,အလျားလိုက်အအေး-အခန်းသေသည်-ပုံသွင်းစက်များ,ဒေါင်လိုက်အအေး-အခန်းသေသည်-ပုံသွင်းစက်များ,သေ-ဒေါင်လိုက်အပြည့်အစုံအတွက်မှိုများကိုပုံသွင်းသည်-ပုံသွင်းစက်များ,မဟုတ်-ferrous metal သေသည်-သတ္တုများ,နှင့် ferrous သတ္တုသေဆုံးလျက်ရှိသည်-မှိုပုံသွင်းခြင်း. ထုတ်လုပ်မှုသတင်းအချက်အလက်: ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း:သတ္တု သတ်မှတ်ချက်:စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည် ခေါင်းပေါက်:လူပျို/မျိုးစုံ ပုံသဏ္န်:မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်အရဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်တယ် ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်မှိုခဲချိန်:မှိုဒီဇိုင်းအတည်ပြုပြီးနောက် ၁ လခန့် T1 နမူနာထုတ်လုပ်မှုအချိန်:၀ ယ်ယူမှုအရခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃ လကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၃၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；50%တီ/T သိုက်；20%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
အကောင်းဆုံးကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲCNC ခုံစက် ?
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အလိုအလျောက်စက် များစွာရှိပြီး CNC စက် သည်သင့်အားရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ CNC လှည့်စက် , CNC ဒေါင်လိုက်စက် ၊ လေဆာစက် ၊ Rotary စားပွဲတင်စက် နှင့် AGV စက် တို့ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းနှင့်မော်တာအစိတ်အပိုင်းများကိုများသောအားဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်လုပ်နေကြသည်။ ကိစ္စအတော်များများတွင်အစိတ်အပိုင်းကိုလုံး ၀ ပုံဖော်ရန်များစွာသောစစ်ဆင်ရေးများလိုအပ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းကိုအမြောက်အများထုတ်လုပ်လျှင်အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းလိုင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။
မှလွဲCNC ခုံစက် , ငါတို့သည်လည်း Casting မှို Die နှင့်အစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းသည်သတ္တုမှပုံသွင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလူမီနီယံသတ္တု ကိုပုံစံခွက်ထဲသို့တွန်းထည့်သည်။ ၎င်းနောက်သင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်ပြီးစီးရန်ထုတ်ကုန် စက်မှုသန့်ရှင်းရေးဓာတု သင့်တွင်လိုအပ်ချက်ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
CNC Lathe Machine	| Machine Industrielle	| Industriemaschine	| Промышленность Машины	| Industria De Maquinas	| Macchina Industriale	| सीएनसी खराद मशीन	| Maquinaria Industrial	| CNC-draaibankmachine	| آلة مخرطة CNC	| Máy tiện CNC	| เครื่องกลึง CNC	| Mesin Bubut CNC	| সিএনসি লেদ মেশিন	| CNC Torna Tezgahı